Global Aawaj | कोभिड विरुद्धको चिनिया खोप सोमबार आइपुग्ने, के के छन् विशेषता ? कोभिड विरुद्धको चिनिया खोप सोमबार आइपुग्ने, के के छन् विशेषता ?
कोभिड विरुद्धको चिनिया खोप सोमबार आइपुग्ने, के के छन् विशेषता ?
१५ चैत्र २०७७ 4:46 pm
काठमाण्डौं । चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप सोमवार नेपाल आइपुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपाललाई प्रदान गरिने खोप चीनको राजधानी “बेइजिङ आइपुगेको र केही दिनमै नेपालमा आउने” जनाएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार चीनबाट आठ लाख मात्रा (डोज) खोप नेपाल आउँदै छ। चिनियाँ दूतावासले पनि फेसबुकमा तस्बिर राख्दै आठ लाख मात्रा खोप नेपाल ल्याउनका लागि बेइजिङस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको जनाएको थियो। नेपालले प्राप्त गर्ने उक्त खोप चार लाख जनालाई लगाउन पुग्ने अधिकारीहरूले बताए। यसअघि भारतीय अनुदान, भारतकै सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग किनिएको र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले खोप प्राप्त गरिसकेको छ। सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग नेपालले किन्न सम्झौता गरेको १० लाख मात्रा खोप भने अझै आउन बाँकी छ।
सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप आइसकेपछि मन्त्रालयले कुन समूह र कहाँका व्यक्तिलाई कसरी खोप लगाउने भन्ने तय गर्ने जानकारी दिए।स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार सरकारले चाँडै नै उक्त खोपबारे निर्णय गर्नेछ। त्यस्तो निर्णय गर्नका लागि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका सुझावहरूलाई समेटिने उनले बताए।
उनले भने, “राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले पछि चिन्न सकिने र सजिलै पहिचान गर्न सकिने संगठित समूहलाई खोप दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ।” अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नै ठूलो सङ्ख्यामा खोप उपलब्ध नभइसकेकाले सकेसम्म बढी संवेदनशील र खोपको आवश्यकता भएको समूहका व्यक्तिहरूलाई उक्त खोप दिइनेछ।
अधिकारीहरूका अनुसार आइतवारसम्म नेपालमा १७ लाख ९० हजार १ सय २५ जनाले कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन्। त्यो भनेको नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५.९३ प्रतिशत हो। पहिलो चरणमा पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूले आगामी वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाउनेछन्। अहिले नेपालमा करिब साढे पाँच लाख मात्रा खोप बाँकी रहेको छ भने भारतको सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाबाट १० लाख मात्रा आउन बाँकी छ। –बीबीसी नेपाली